Iiraan: weerar kasta oo Suhnuuniyadda Mareykanka nooga yimaadda waan iska difaaceynaa - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka STRINGER/Reuters
Image caption Taliyaha Ciidamada Iiraan Qassem Soleimani (bidixeeya)
Saraakiisha sarsare ee dalka Iiraan ayaa sheegay iney diyaar u yihiin iney iska difaacaan dagaal kasta uu cadowgooda Mareykanka ku soo qaado.
Wargeyska Jerusalem Post ayaa qortay iney Iiraan ciidamadeeda heegan gelisay si ay uga hortagaan dagaalka laga cabsi qabo inuu ka qarxo bariga dhexe.
Dhinaca kale wargeyska The Guardian ayaa qoray "inuu Taliyaha guud ee ciidamada kacaanka ee Iiraan ee Quddus, Qassem Soleimani uu seddex toddobaad ka hor la kulmay madaxda dalka Ciraaq, wuxuuna milishiyaadka Ciraaq uu u sheegay iney iisu diyaariyaan "dagaal aan toos ahayn oo dalal kale ay ku lug leeyihiin."
Iiran waxay billaawday iney bariga dhexe xulafa ka sameysato, waxayna wadahadallo la yeelataya Mareykanka iyo Ingiriiska.
Xoghyaha arrimaha dibadda Jeremy Hunt wuxuu sheegay labada dalba iney qaramada midoobay ay la wadaageen: halista Iiraan ee sii kordheysa.
Iiraan: Waxaan bilaawnay sameysashada diyaaradaha dagaalka
Iiraan: Tallaabo ayaan ka qaadi doonaa dadkii dhisay dhismayaasha dumay
Ma aha marki ugu horreysay oo uu Soleimani uu la kulmo hoggaanka Shiicda ee ciraaq isaga ugu baaqay iney dagaal iisu diyaariyaan.
Kulanka ay yeesheen madaxda Iiraan iyo Shiicada Ciraaq kaddib ayaa waxay sababtay iney shaqaalaha dowladda ee Mareykanka in laga saaro Ciraaq si looga badbaadiyo halista xulafada Iiraan uga iman karto.
Mareykankana shaqaalahiisa rayadka ee ku sugan Ciraaq iyo Suuriya wuxuu u diray digniin ku saabsan iney aad u foojignaadaan maadaamaa ay xilli kasta Iiraan iyo xulafadeeda waxyeello uga iman karto.
Image caption Ayatollah Cali Khamenei
Hoggaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Aayatullah Seyed Ali Khameyni oo la kulmay madaxweynaha Swiss wuxuu sheegay iney Iiraan dooneyn iney dagaal la gasho Mareykanka.
Wakaaladda wararka ee Iiraan (IRNA) oo soo xigatay wasiirka gaashaan dhigga Iiraan Amir Hatami waxay sheegtay inuu wasirrka yiri "iney iska difaacayaan weerar kasta oo uga yimaadda sahyuuniuyadda Mareykanka."
Wasirkii ugu saameynta badnaa Iiraan oo casilay
Iiraan ma ka badbaadi doontaa cunaqabataynta?
Mareykanka: Tallabba kasta oo khatarta Iiraan looga hortagi karo waan qaadeynaa
Wargeyska New Yor Times wuxuu qoray "inuu Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo la hadlayey ku simaha wasaaradda gaashaan dhigga Patrick Shanahan, uu sheegay inuu dooneyn inuu dagaal l agalo Iiraan."
McKenzie oo booqasha ku maray waddamada khaliijka oo u warramay Telefishiinka Sky News laantiisa carabiga wuxuu sheegay "Mareykanku wuxuu sii wadayaa inuu had iyo jeer garab siiyo saaxibbada iyo xulafada aan ku leennahay khaliijka iyo bariga dhexe si aan isaga kaashannno khatarta dhammaanteen naga soo wajihi karto dhinaca Iiran si wada jir ah si aan uga hortagno."